हामीले जति गर्न सक्थ्यौं, त्यो मौका पाइरहेका छैनौं
२०७६ श्रावण २७ सोमबार १४:३३:००
२०६१ सालमा अर्जुन पोखरेलले एउटा गीत तयार पारे, ‘सानी मोरी मलाई मन पर्‍यो’ । यो लोकगीत थियो । त्यसपछि ‘दिलमाया’ चलचित्रका गीतबाट स्रोता तथा दर्शकमाझ आएका उनलाई चलचित्रकै गीतले चिनायो । अहिले चलचित्रका लागि रोमान्टिक गीत कम्पोजका लागि अर्जुन पोखरेल पहिलो रोजाइको नाम हो ।
‘बाटो मोडेर गयौ...’, ‘छुकछुके साथ टुट्छ कि नाता...’, ‘सुन्छु तिमीले मलाई भुल्नै आँटेकी छौ रे...’, तिम्रो माया भुलेर अरुसँग भुल्नु परे मेरो प्राणै जाओस..., ‘म त अलपत्र पर्छु तिमी नभएको बेला..., ‘तिमी रोएको पल...’ जस्ता दर्जनौं सुपर हिट गीतमा संगीत भरेका अर्जुनले अहिलेसम्म ५३ वटा चलचित्रका लागि डेढ सयभन्दा धेरै गीत तयार पारिसकेका छन् । उनले यति नै सख्यांमा एल्बमका गीतमा पनि काम गरिसकेका छन् । उनै संगीतकार अर्जुन पोखरेलसँग नेपाली गीतसंगीतसँगै पछिलो समय गीत चोरी हुन थालेको सन्दर्भमा नियतवश गीत चोरिन्छ अथवा संयोग मात्रै हो ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानीः
आफ्नैभन्दा पनि चलचित्रका गीतमा बढी संगीत भरिरहनु भएको छ नि !
हामी संगीतकारहरु आफैँ लगानी गरेर कमैमात्रै गीत गाउँछौं । यद्यपि पछिल्लो समय दुईतीन वटा गीत म आफैँ गर्दैछु । चलचित्रमा गरे पनि आफ्नोमा गरे पनि हुन त आफ्नै हो । बाहिरको काम नआएको खण्डमा तपाईंले भनेजस्तो आफैँ लगानी गरेर काम गर्ने पनि हुन्छ ।
चलचित्रमा अरुले दिएको विषय र परिवेशभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ, तर आफ्नै हिसाबले गीतसंगीत तयार पर्दा पूरै स्वतन्त्रता हुन्छ । स्वतन्त्र रुपमा गीतसंगीत तयार पर्दा अझ राम्रो सिर्जना हुन्छ होला हैन ?
चलचित्रमा स्वतन्त्रता छैन भन्दिन म, किनभने आफ्नै गीतमा संगीत गर्दा पनि गीतको शब्दले भन्ने कथा वरिपरि नै बस्नुपर्छ । स्टोरी बनाएरै गीत लेख्ने हो । यो गीतको शब्दभित्र बसेर केही नयाँ कम्पोज गर्छु भन्ने त हो । यद्यपि चलचित्रमा ठूलो समूहसँग बसेर काम गर्नुपर्छ त्यसमा केही झन्झटिलो हुन्छ । र समय पनि लाग्छ ।
अरुले दिएको सीमित परिधिभित्र बसेर काम गर्न कत्तिको कठिन हुन्छ ?
कथाको परिधि चलचित्रभित्र हुन्छ तर त्सले मलाई बाँधेर संकुचित बनाउँदैन । मैले भोगिरहेका कयौं कुराहरु नै त्यहाँ हुन्छन् । हाम्रोमा पूरै फरक धारको चलचित्र बनिरहेका छैनन् । पूरै फरक धारमा चलचित्र बनेका भए संगीतमा पनि फरक प्याट्रन आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले पनि गरिरहेकोभन्दा फरक संगीत गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कमेडी र लभस्टोरी चलचित्र बनिरहेको छ । कमेडी चलचित्रमा लोक बेसको गीतसंगीतलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने लभस्टोरीमा रोमान्टिक नम्बर राखिएको छ । मायाप्रेम उस्तै नै हो हिजो र आज माध्यममात्रै फरक हो । हिजो चिठीपत्र लेखिन्थ्यो होला आज मोबाइल र नेटबाट सञ्चार हुन्छ । तर, फिलिङ्स त उही हो ।
यसको अर्थ एकै प्रकारका चलचित्र र गीतको माग हुँदा तपाईंहरुलाई चलचित्रमा नयाँ काम देखाउने अवसर नमिलेको हो ?
पक्कै पनि हो । पूर्विय कला क्षेत्रमा गीतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालभर वर्षमा भारतमा चलचित्रको कथाजस्तै गीतलाई पनि महत्व दिइन्छ । पाश्चात्य चलचित्रमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मात्रै छ, तर कथा भन्न गीतको प्रयोग कम गरिन्छ । सायद त्यस्तो चलचित्रको लगानी नउठ्ने भएकाले पनि होला, यस्ता चलचित्र कम बनेका छन् ।
हाम्रोमा लोकगीत बनाउने भनिन्छ । जसले बनाए पनि लोकगीतमा भयङ्कर फरक केही पनि गर्न सकिँदैन ।
हामी उस्तै परिवेशमा बाजा ढोलक, तबला, सनई, बासुरी र सारङ्गी हाल्छौं । चलचित्र निर्माताहरुको पनि त्यस्तै डिमान्ड हुन्छ । यी बाजा बजाउने बाद्यवादक संगीतकार फरक किन नहुन् प्रायः तिनै हुन्छन् । चलेका गायकगायिका लिइन्छ । उनीहरुको टोन उही हो । मेकरले हामीलाई कि लोक झर्रो चाहियो कि अलि मोडर्न चाहियो भन्नुहुन्छ । यी दुईटा विकल्पबाट टाढा नजाने बित्तिकै लोक गीत बन्ने भनेको ६–८ र २–४ मा बढी हो । त्यसैले भयङ्कर परिवर्तन चाहिँ केही हुँदैन ।
रोमान्टिक नम्बरमा पनि त्यस्तै छ । जहिलेबाट नेपाली चलचित्रमा रोमान्टिक गीत चल्न थाल्यो, संगीतकार फरक होला तर गीत करिबकरिब उस्तै छन् । संगीतकारको दोष पनि होइन किन भने मेकरले माग्छन् नै त्यस्तै । पियानो, गीतार बजाएको । रोमान्टिक भए अपर मुस्ताङ लगिन्छ लोक गीत भए मेलामा खिचिन्छ अनि कसरी आउँछ परिवर्तन ?
त्यसो भए कस्तो अवस्थामा फरक गीत सिर्जना सम्भव छ ?
चाहे त्यो क्लासिक होस् या सेमिक्लासिक तर मेरो कथा बोल्नु प¥यो भनेको खण्डमा त्यहाँ नयाँ संगीत जन्मिन सक्छ । हुन त यही धार चल्ने हो तर हामीले जति गर्न सक्थ्यौं त्यो मौका पाइरहेका छैनौं ।
राम्रो काम त आफ्नै लगानीमा गर्दा पनि के होला र ?
सकिन्छ । आफ्नै लगानीमा यस्ता सिर्जना बाहिर आउन सक्छन् । तर के छ भने स्टारडम भएका नायक नायिका र राम्रो ब्यानरका चलचित्रले त्यो गीत राख्यो भने चलचित्रलाई नै लोकप्रिय बनाउन सक्छ । यद्यपि आम रुपमा चल्ने गीत र गम्भीर गीतमा फरक हुन्छ । यस्ता गीत त्यति चाँडो हिट हुँदैनन् । जस्तै ‘मुनामदन’ जति हिट थियो ‘सकुन्तला’ महाकाव्य त्यति हिट थिएन । संगीतमा पनि त्यस्तै हो । सरल शब्द भएका लोकगीत जति हिट हुन्छन् हामीले अहिले कुरा गरेका गीत त्यति हिट हुँदैनन् ।
अर्को पक्ष हामी चलेका टप नायक नायिका लिन सक्दैनौं । प्रचारका लागि चलचित्रमा जस्तो हामीसँग पैसा पनि हुँदैन । तर, चलेका चलचित्रका ब्यानरले हिट गीत एउटा हालेर हामीले भने जस्ता गीत राख्ने हो भने त्यस्ता सिर्जना आउन सक्छन् ।
ऐतिहासिक, अब्सट्रयाक्ट चलचित्र बनेर तिनीहरुले सहजै लगानी उठाने अवस्था भएको भए नेपालमा पनि भने जस्तो संगीत सिर्जना हुनेथियो ।
भनिन्छ अब्बल सर्जकले आफ्नो सिर्जनामार्फत बजारलाई निर्देशित गर्न सक्छ, तर हाम्रोमा त बजारले सर्जकलाई निर्देश गरिरहेको छ । कस्तो विडम्बना हो यो ?
बजारले किन निर्देशन गर्दोरहेछ, हामी किन बजार निर्देशित हुँदारहेछौं र हाम्रो सिर्जना किन मर्दोरहेछ भने एल्बममा गरेका गीत जतिसामु पुगेका छन् त्यसलाई धेरैले राम्रो भन्नुभएको छ । तर, त्यस्ता सिर्जनालाई हामीले आर्थिक अभावका कारण आम समाजमा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं । एउटा गीत रेकर्ड गरेर भिडियो बनार बजारमा पुर्‍याउन पाँच लाख चाहिन्छ । तर, त्यसको रिटर्न कति हुन्छ लगानी गर्नेले सोच्छ । अहिले बजारमा पूरै गीत चलेको छैन । सर्ट क्लिप्स चलेको छ । गीत टिकटकमा हिट भइरहेको छ । स्थायी र अन्तरा पूरै सुनेपछि आनन्द आउने गीत बजारमा भाइरल हुँदैन । पहिला म आफू टिक्नु पर्‍यो । टिक्नका लागि कुनै न कुनै रुपमा म पनि बजार निर्देशित हुनुपर्छ, चाहेर पनि नचाहेर पनि ।
भारतीय चलचित्रले गर्दा संगीतकारहरुलाई अलि सहज छ हैन ?
भारतमा चलचित्रको पाश्र्व संगीतले नै पूरै देशको संगीत मार्गनिर्देश गर्छ । हाम्रोमा लोक गीत हिट भए जस्तो त्यहाँ हुँदैन । चलचित्रकै गीतको दबदबा छ । केही पञ्जावी गीतको भ्युज सलमानका गीतकाभन्दा धेरै छन् तर त्यो अपवाद मात्रै हो । चलचित्रको गीतले नै भारतको संगीत निर्देश गरिरहेको अवस्था छ ।
हामीलाई पनि राम्रो ब्यानरको चलचित्रको गीतमा गाउन तथा संगीत गर्न पाइयो भने प्रचारप्रसारको समस्या हुँदैन भन्ने लोभ चाहिँ हुन्छ । नेपालमा पनि नारायण गोपाल, बच्चु कैलाश, पत्तेमान, गोपाल योञ्जनको पालामा जुन बेला रेडियो नेपाल मात्रै थियो रेकर्डिङ गर्न र बजाउन त्यो बेला आधुनिक गीतसंगीतले नै नेपाली गीतसंगीतलाई लिड गरेको थियो । तर जब चलचित्र धेरै बन्न थाले, र शम्भुजित बाँस्कोटा आउनुभयो । उहाँको पालाबाट नेपालमा पनि चलचित्रका गीत र संगीतको प्रभाव रहँदै आयो ।
तपाईंलाई चलचित्रले जन्माएको संगीतकार भन्दा न्याय हुन्छ कि हुँदैन ?
हुन त मैले ०६१ सालमा एउटा लोक गीत गाएँ ‘सानी मोरी मलाई मन पर्‍यो’ । त्यसपछि मैले चलचित्रकै गीत ‘दिलमाया’ भन्ने चलचित्रको गीत गाएँ त्यसैले मलाई चिनायो । त्यसपछि अर्जुन पोखरेल पनि राम्रो संगीतकार रहेछ भन्ने धेरैलाई थाहा भयो र चलचित्रबाट काम आउन थाल्यो ।
अहिले कपिराइटको कुरा उठ्न थालेको छ । कम्पोज गरिरहँदा कत्तिको डर लाग्छ ?
कपिराइटको कुरा उठ्दा हामी सबै सर्जक पनि छातीमा हात राखेर बोल्दैनौं । आफ्नो पक्षको सर्जक हो भने मिले पनि नमिलेको छैन भन्छौं । आफ्नो पक्षको हैन भने थोरै उस्तैउस्तै भए पनि मिलेको छ भन्दिन्छौं । पहिलो कुरा हामी सर्जककै मन पापी छ भन्ने लाग्छ मलाई, जसका कारण यो भइरहेको छ ।
जसले गीत तयार पारेको हो । उसको गीत जसको सँग मिल्यो उसले मिल्यो भनिएको गीतसँग दुईपटक आफ्नो संगीत सुन्यो भने मिल्यो मिलेन ऊ आफैँले निर्णय लिन सक्छ ।
संसारभर १२ सुरभित्रै गीत बन्ने हुन् । मेरो ‘तिम्रो याद आउँछ...’ भन्ने गीत रामलिलाको गीत ‘ए लालिक्स...’ जुन मेरो भन्दा पछि आयो युट्युबमा, मेरो गीतको जस्तै थियो गीत उठउने तरिका । तर, मलाई मेरो गीतबाट त्यो गीत चोरिएको हो भन्ने कहिले पनि लागेन । किन भने त्यो पनि रागको कलरबाट निकालेको थियो, मैले पनि उत्तर संगीत भारतीय पद्धति पढेको हुँ । त्यहाँ पनि त्यही चल्थ्यो । त्यो रागको पकड शैली र आरोह अवरोह उस्तै हो । त्यो कलरमा बसिसकेपछि अलिअलि मिल्छ । कहिलेकाहिँ यसरी पनि मिल्न सक्छ । यसलाई चाहिँ मिल्यो, चोर्‍यो भन्न मिल्दैन ।
पछिल्लो समय नेपालमा गीतहरु चोरियो भनेर कपिराइटका कुरा बाक्लै उठ्न थालेको छ । जानाजान चारिएकै हो कि संयोगवश मिलेकै हो ?
मुद्दामामिला चलिरहेको गीतबारे सोध्नु भएको हो भने जसलाई आरोप लग्यो उहाँहरुले गीतको नोट लेखेर देखाउनु पनि भयो । एउटा दुईटा नोट त मैले नारायण गोपालको गीत गाएँ भने पनि तलमाथि हुन्छ । किनकी मेरो शैलीमा आउँदा एउटा दुईटा नोट तलमाथि हुन्छ, तर लवज चाहिँ त्यही हुन्छ । कर्ड उही छ, विट उही छ, लवज उही छ तर दुईतीनवटा नोट तलमाथि छ भन्न थालिन्छ भने यहाँ भोलि क्रिएसन मर्न थाल्छ । किन भने पहिला चलेका गीतलाई केही नोट तलमाथि पारेर फरक पार्न सकिन्छ । कर्ड, विट, लवज मिल्छ भने ऊ त प्रभावित भएको हो । चाहेर मिलोस् या संयोगले यस्तो अवस्थामा उसले मैले चाहेको थिइन तर मिलेको मैले पनि अनुभव गरेँ ठिक छ यसमा के राइट्स मैले उहाँलाई दिनुपर्ने हो दिन म तयार छु भन्न सक्नुपर्छ । दुईटा नोट तलमाथ पारेर मेरो गीत फरक छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन ।
मैले फेरि दोहोर्‍याएँ, गीत कम्पोज गरिरहँदा अरुकोसँग मिल्छ कि भन्ने डर हुन्छ कि हुँदैन ?
हुन्छ जस्तो लाग्छ । मैले चाहिँ लोक गीतमा काम गरेको छु । हुन त म लोक गीत नै पढेर आएको हुँ । तर लोकभन्दा रोमान्टिक गीतलाई स्रोताले स्वीकार गर्नुभयो । पछिल्लो समय आएका मुद्दा मामिलाका कारण डर चाहिँ पक्कै पनि छ । लोक गीतको आफ्नै परिधी छ । पूर्वको लोक गीत, पश्चिमको लोक गीत र काँठे लोक गीत हो । यी तीनभित्र रहेर काम गर्दा आ–आफ्नो गीतमा कलर मिल्छ । एउटै कलरभित्र पनि फरक सिर्जना गर्ने हो । सबै प्रकारका गीत सुनेको हुन्छ । कहिलेकाहिँ सबकन्सस माइन्डमा सुनेको गीतको लय बसेको हुनसक्छ । त्यो कम्पोजमा आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नियत खराब नहुँदा नहुँदै पनि मिल्न सक्छ । यस्तो डर त हरेक कम्पोजरलाई हुन्छ ।